China Vacuum Ropa Kuunganidza Tube Kugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
Ropa rekuunganidza chubhu yekugadzira tambo inosanganisira chubhu kurodha, Chemical dosing, kuomesa, kumira & kubaya, kupukuta, tireyi kurodha, nezvimwe. Inofananidzwa nevamwe vagadziri, yedu michina ine yakasarudzika maficha, kusanganisira yakazara dhizaini idiki, yakakwira otomatiki & kugadzikana, yakaderera mhosva rate uye yekugadzirisa mutengo, uye nezvimwe.
Zvekutsvaira kana kusiri-kutsvaira ropa rekuunganidza chubhu kugadzirwa.
Tube Kunyora & Online kudhinda
Tora chiGerman Leuze GS photoelectric sensor, United States AB servo mota yekudzora chitambi kutumira, JSCC mota uye inoenderana yekumhanyisa dhiraivha yekutyaira kukuru uye chitambi kudzvanya.
Zvinogona kuva ne kudhinda pamhepo system ye batch kodhi uye kudhinda kwezuva.
Mumwe muchina anogona kuva 8mm / 13mm / 16m.
Kubatanidza pamhepo pamwe dzaFord.
Tube kurodha & Kuona
Otomatiki chubhu kurodha tekinoroji, kurodha iyo chubhu muzvisungo otomatiki ne detector yeisina chubhu kana inverse mirayiridzo chubhu. Muchina unonyorera chero mhando yemazita machubhu uye kugadzirisa kukanganisa kweayo avo label yakatsemuka yetsika chubhu kurodha muchina
kubva kune vamwe vagadziri.
Gadzirira ne3 dosing system, zvinoenderana nemutengi weropa rekuunganidza chubhu yekugadzira kudiwa.
USA FMI pombi, pfapfaidzo dosing
Sirinji pombi inosimudza dosing
Sirinji pombi yekuzadza dosing
Muchina une basa re otomatiki chivharo kuronga, chivharo kudyisa, chivharo munzvimbo yekucherechedzwa, kubata capping. Mukati mechubhu inozogadzira yega kumanikidza kwakashata, wozoisa yega chubhu mutray.
Kuchengeta & Kuchengeta & Teresi Kuisa
Kune mana maseti ekuomesa system, kutora PTC kudziyisa, hapana kusvibiswa kune mukati memachubhu, uye achineve yakanyanya kushanda kwekuomesa. Iyo ine chaiyo yekumisikidza chishandiso kune anopisa matanda uye machubhu.
IVEN Ropa Kuunganidzwa Tube Kugadzira Mutsetse Zvakanakira
1.High chinzvimbo 15000-18000pcs / awa
2.High kushandisa michina, anonzwisisika mashandiro maitiro uye optimization yekubatanidzwa, 2-3 vane hunyanzvi varairidzi vanogona kubata izere yekugadzira mutsara zvakanaka kubva kuhubhu kurodha kusvika kune yakapera chigadzirwa kuburitsa
3.Inokodzera vharuvhu uye isiri-yekutsvaira ropa rekuunganidza chubhu, uye isu tinokwanisa kugadzirisirwa kushandiswa kwevatengi mumutsara mumwe.
5.Ropa rekuunganidza chubhu yekugadzira mutsara mutsara wese vane maitiro ehunhu kudzora. Kuonekwa kwakawanda-kwakawanda, senge machubhu akadzoreredzwa, machubhu asipo, dosing, tembiricha yekuomesa, chivharo pachinzvimbo, foam tireyi kurodha nezvimwe.
6.Three Dosing Sisitimu. Yakakodzera dosing, 3 seti dosing system iyo inogona kusangana akasiyana ekuwedzera / reagents zvigadzirwa zvinodiwa.
7.Advanced Inopindirana Tereyi Kuisa Technology. Chinyowani nyowani tekinoroji ine basa rekupindirana kurodha uye kureba kuchinjika otomatiki. Inoshandiswa kune ese ari maviri marudzi emakona mana uye akapindirana furo tireyi.
8.High Vacuuming Anokodzera Rate. Iine yakasarudzika dhizaini yechirimo-mhando chubhu racks. Iyo yekutsva dhigirii inogona kuiswa pane yekubata skrini zviri nyore uye nemazvo, inoenderana vharuvhu degree inogona otomatiki kumisikidzwa zvichienderana nekukwira kwenzvimbo yemushandisi.
9.High Quality Structure: Main muviri kutora yepamusoro simbi yekurema uremu, pamusoro uye furemu tevera yepamusoro simbi isina simbi kuitira nyore kuchenesa. Sangana neGMP yakajairwa
Inoshanda Tube Saizi Φ13 * 75 / 100mm; Φ16 * 100mm
Kushanda Speed 15000-18000pcs / awa
Dosing Nzira uye Akarurama Anticoagulant: 5 dosing nozzles FMI metering pombi, kukanganisa kushivirira ± 5% yakavakirwa pa20μLCoagulant: 5 dosing nozzles chaiyo ceramic jekiseni pombi, kukanganisa kushivirira ± 6% zvichibva pa20μLSodium Citrate: 5 dosing nozzles chaiyo ceramic jekiseni pombi, kukanganisa kushivirira ± 5% zvichibva pa100μL
Kuomesa Nzira PTC kudziyisa ine yakanyanya kumanikidza fan.
Cap Tsanangudzo Yakaderera mhando kana kumusoro mhando cap maererano nezvinodiwa nevatengi.
Zvinoshanda Foam tireyi Yakapindirwa mhando kana rectangular mhando furo tireyi.
Nzvimbo Yekugara 6300 * 1200 (+ 1200) * 2000 mm (L * W * H)
Pashure: Sirinji Kuungana Machine
Zvadaro: Vial Liquid Kuzadza Kugadzira Line
Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Muchina À Coudre Led, Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Disposable Syringe & Tsono Production Line,